Casemiro Waa Xidiga Booskiisa Aduunka Ugu Fiican, Bixitaankii Neymar Ee Camp Nou Layaab Ayuu Igu Noqday Sidoo Kale Barcelona Waxay Ka Horaysaa Real Madrid. – WWW.Gool24.net
Casemiro Waa Xidiga Booskiisa Aduunka Ugu Fiican, Bixitaankii Neymar Ee Camp Nou Layaab Ayuu Igu Noqday Sidoo Kale Barcelona Waxay Ka Horaysaa Real Madrid.
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Casemiro ayaa helay amaan ah in uu yahay xidiga aduunka booskiisa ugu fiican kadib qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu Zinedine Zidane iyo kooxdiisa Real Madrid kaga soo caawiyay in ay ku guulaystaan koobka Champions Leaque iyo horyaalka Spain ee La Liga. Casemiro ayaa muhiim markasta ka ah shaxda Zidane tan iyo markii uu macalinka ree France xidigan ka dhigay mid si buuxda u helay kalsoonidiisa.
Halyaygii ree Brazil ee Mauro Silva ayaa Casemiro u hibeeyay amaan ah in uu yahay xidiga booskiisa aduunka ugu fiican laakiin waxa Mauro Silva sidoo kale sheegay in ay isaga layaab ku noqotay go’aankii uu Neymar kaga baxay Camp Nou . Marco Silva ayaa dhinaca kale ka hadlay xifiltanka Real Madrid iyo Barcelona wuxuuna sheegay in Madrid ay hadda xoogan tahay balse ay Barcelona tahay kooxda Madrid ka horaysa.
Ugu horayn Marco Silva oo Brazil kula soo guulaystay koobkii aduunka ee 1994 ayaa si wayn u amaanay Casemiro wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan jecelahay Casemiro, isaga ww mid ka mid ah dhaliilaha aan anigu lahaa, isagu wax walba si fiican ayuu uga qabtaa difaaca hortiisa wuxuuna deganaan u gudbiyaa kooxda oo dhan. Markasta si masax fiican ayuu u dhaqaaqaa isla markaana hadda waxa uu ku darsaday goolasha, aniga ahaan isagu waa xidiga aduunka ugu fiican booskiisa”.
Intaa kadib Marco Silva ayaa wax laga waydiiyay talada uu Casemiro siinayo wuxuuna yidhi: “Anagu boos isku mid ah ayaanu ka ciyaarnaa, laakiin isagu si aad u fiican ayuu shaqada u qabtaa, waxa uu yaqaanaa waxa ay tahay in uu qabto isla markaana waa ciyaartoy aan raadsan in uu noqdo ciyaartoyga garoonka laga dhex ogyahay inta badan, haddii uu doonayo in uu qabto wax ka badan waa in uu magac helaa, ma noqon doonto Casemiro la mid ah, isla markaana si fiican uma ciyaari doono”.
Intaa kadib Marco Silva ayaa ka hadlay go’aankii uu Neymar kaga baxay Camp Nou wuxuuna yidhi: “Wax yar ayay aniga layaab igu noqotay, xaqiiqdii waxaan la hadlay Neymar aabihii wuxuuna ii sheegay in uu kula taliyay in uu Barcelona sii wato, laakiin wiilka ayaa raadinayay ujeedooyin kale. Go’aanku waa geesinimo iyo halis laakiin kaliya waqtiga ayaa sheegi doona in uu qaldanaa iyo in kale”.
Xidigii hore ee qaranka Brazil ee Marco Silva oo waayo layaableh ku soo qaatay kooxda Deportivo markii ay horyaalka La liga taariikhda ka abuuraysay ayaa wax laga waydiiyay xifiltanka u dhexeeya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona wuxuuna sidoo kale ka hadlay horyaalka La Liga.
Marco Silva oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Horyaalku waa mid aad u xiiso badan sababtoo ah Barcelona ayaa horaysa laakiin waxaan hadda arkaa Real Madrid xoogan, taasi waa sababta aan u sheegayo in uu noqon doono mid aad u xiiso badan”.
Intaa kadib Marco Silva ayaa si khaas ah u amaanay Zidane wuxuuna yidhi: “Shaqada uu Zidane qabanayaa waa mid haas ah isla markaana aad ayaan isaga ugu faraxsanahay. Anigu waan ku faraxsanahay isaga sababtoo ah waa shaqsi fiican oo aad isku dhul dhiga taas oo ah labada shay ee tababare u fiican. Khibradayda, dhamaadka waxaad ogaan doontaan in tababaraha iyo ciyaartoyga ugu fician ay markasta ka danbayso shaqsiyad wanaagsani taas ayayna arintu tahay”.